Zimshaqisile izinsongo - Ilanga News
Home Izindaba Zimshaqisile izinsongo
Ngemuva komcimbi bahlela ukuhlangana nomasipala
u-Ayanda Ncwane, oyinkosikazi kaSfiso Ncwane (ongasekho), owayengumculi we-gospel zimethusile izinsongo sokumiswa
USHAQEKILE ezwa ngezi-nsongo zokumiswa komci-mbi wakhe kungakaze ku-khulunywe naye u-Aya-nda Ncwane, oyinkosikazi kaSfiso Ncwane (ongase-kho), owayengumculi we-gospel.
Ekhuluma neLANGA u-Ayanda mayelana nodaba oluphume kwiLANGA langeSonto – elinguzakwabo waleli phephandaba – uthe kummangazile ukuthi udaba luze lufinyelele kwabezindaba kodwa engakaze abikelwe ngezinkinga mayelana nomcimbi.
ILANGA langeSonto libike ngeSonto ngokuthi kuneqeqebana labaculi ebelisonga ngokuthi i-Afri-Gospel Unite Festival, okuwumcimbi ohlelwa yinkampani ka-Ayanda, iNcwane Communications eSibusisiwe Hall, eMandeni, ngeke ubekhona uma abaculi bendawo bengaqashwa futhi bakhokhelwe.
U-Ayanda uthe ngoLwesibili ubenomhla-ngano nalaba baculi abebenezikhalo, kwaphunywa nesivumelwano. Uthe nakuba lo mhlangano ubekhona, kodwa ubacacisele abaculi abebenezikhalo ukuthi uMasipala waseMandeni awuhlangene nalo mcimbi.
“Engikubonayo wukuthi abaculi abebe-nezikhalo bebengakuqondi ukuthi umasipala kawuwuxhasile lo mcimbi. Eqinisweni selokhu waqala ukwenzeka kule ndawo, umasipala kawukaze ufake ngisho isenti kuwona,” kusho u-Ayanda.
Uvumile ukuthi uzizwile izikhalo zabaculi wabachazela ngokuhlelwa komcimbi basebeyawuqonda.
“Ngingakusho ngi-ngananazi ukuthi kawukho umcimbi ohlelwa yiNcwane Communications ongabaniki abaculi abasakhula ithuba. Ukuthi abaculi bendawo kasibafaki-le esikhangisweni, akusho ukuthi basuke bengekho,” ku-sho u-Ayanda eveza nokuthi nakowokuhlukanisa unyaka bayaba naso isikhathi salabo abasafufusa ukuze bazibonakalise.
Uthe isizathu esenza lo mcimbi wenzelwe eMandeni, yingenxa yocwaningo abalwenza obeluveza ukuthi kawukho umcimbi omkhulu we-gospel owenzeka kule ndawo.
UPhathabakhe Shezi, okhulumela iqeqebana labaculi ebelinganelisekile, uvumile ukuthi bahlanganile no-Ayanda baphuma nesivumelwano.
“Nakuba besingenalo ulwazi ukuthi umasipala kawuxhasile, kodwa kuyasijabulisa ukuthi u-Ayanda usinikile ithuba sabonisana, saphuma sikhuluma ngazwi linye,” kusho uPhathabakhe. Uthe kusukela manje kuya phambili, bazimisele ngokusebenza ngokubambisana no-Ayanda, baqinisekise ukuthi lo mcimbi uba yimpumelelo.
“Ngemuva komcimbi sihlela ukuba sibe nomhlangano nomasipala lapho sizobheka ukuthi ungafaka kanjani isandla kulo mci-mbi omkhulu kangaka eMandeni,” kusho uPhathabakhe.
I-Afri-Gospel Unite Festival ibophele abaculi abanohlonze okubalwa kubo uBabo Ngcobo, uHlengiwe Mhlaba, uKholeka, uTatenda Nahachi, uThinah Zungu, u-Ayanda Shange, uJumbo, Abathandwa, uBetusile, uRebecca Malope, u-Ayanda Ntanzi, noSbu Noah. Abaphathi bohlelo nguSbu Buthelezi noMthunzi Xulu. Amathikithi alo mcimbi ayatholakala eComputicket naseShoprite.
Previous articleUmshushisi omkhulu ecaleni lokusoconga inkosikazi
Next articleBelulekwe ngokwengqondo abadlali beBafana Bafana